Home Wararka (Akhriso Qabiiladooda) Xubnaha Mirifle ee ku jira Golaha Wasiirada oo diiday ansixinta...
(Akhriso Qabiiladooda) Xubnaha Mirifle ee ku jira Golaha Wasiirada oo diiday ansixinta 12 Danjire oo uu Farmaajo soo magacaabay
Kulankii Khamiislaha ahaa ee golaha wasiirrada Soomaaliya waxaa maanta la hor geeyey liiska 12-safiir, si looga ansixiyo golaha, balse dood adag ayaa ka dhalatay xubnihii ku qornaa liiskaas oo la sheegay inay u badnaayeen hal beel.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa golaha hor keenay liiska ay ku qornaayeen magacyada 12-kaas xubnood si wasiirrada looga ansixiyo safiirnimadooda.
Xubnaha ku jira golaha wasiirrada ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ay si adag uga hor yimaadeen in cod loo qaado xubnahaas, iyagoo ku dooday in magacaabidooda aan la waafajin nidaamka awood qeybsiga beelaha ee 4.5.
“Mudane Ra’iisul Wasaare waxaan halkaan kuugu soo gudbinayaa soo jeedin magacaabis Danjireyaal ka howl geli doona dibadda, si loo dhameystiro danaha Diblomaasiyadeed ee aan ka leenahay caalamka, Mudane Ra’iisul wasaare waxaan kaa codsanayaa in laga ansixiyo golaha,” ayaa lagu yiri qoraalka ay wasaaradda arrimaha dibadu ku dalbaneysay in loo ansixiyo xubnaha loo waday danjireyaasha.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shir guddoominayey kulankii maanta ayaa go’aamiyey in wasiirka arrimaha dibedda uu dib ula laabto liiska xubnahaas ay ansixintoodu dooda ka dhex abuurtay golaha, isla markaana lasoo waafayo hanaanka awood qeybsiga beelaha Soomaaliyeed.
Liiska Danjirayaasha maanta la magacaabay waxay kala yihiin:
Axmed Cali Daahir (Beesha Dirta Koofureed)
Cabdulqaadir Axmed Kheyr (Reer Aw-Xasan)
Abshir Xasan Abshir (Daarood, Majeerteen Ciise Maxamuud)
Liibaan Sheekh Mohomud (Daarood, Ogaadeen)
Cabdullahi Axmed Jaamac (Daarood, Warsangeli)
Ilyaas Sheekh Cumar Abuukar (Digil – Fahad Yasin Adeerkiis QABA Hooyadiis)
Xasan Cabdi Daa’uud (Dir, Isaaq, Sacad Muuse)
Sahro Xasan Daanduush (Somali Eriteriyaan)
Saalim Moo Hagi. (Carab Somali)
Cali Maxamed Maxamuud (Hawiye Murasade. Marwo Saynab Macalin Walaalkeed)
Yoonis Yaasiin Xaashi (Daarood Majeerteen, Cumar Maxamuud)
Cilmi Faarax Nuur (Webi) (Hawiye, Xawaadle)
Xubnahaan ayaa la sheegay inay u badanyihiin hal beel, taas oo dhalisay dooda ah in magacaabidooda aan la waafajin nidaamka awood qeybsiga dalka ee afar dhibic shan (4.5).
AL-shabaab oo weerar rogaal-celis ah ku qaaday deegaanka Biya Cadde